Iindaba- Kutheni iindawo ezininzi zisetyenziselwa ukuprinta i-albhamu yemveliso kunye nentengiso?
Isixeko ngasinye siyatshintsha ngokuthe ngcembe, kwaye notshintsho esixekweni luza kuvela kwimali eyahlukeneyo, kwaye nakumashishini ahlukeneyo kuphuhliso lwezoqoqosho, kwaye zininzi iinkampani ezinkulu ezifuna ukukwazi ukwenza ishishini lazo nokuba zingcono, ukuze zikwazi Ukutsala abathengi abaninzi, ewe, baya kukhetha indlela eyahlukileyo yokwazisa ngeemveliso zabo, eziya kuthi zibe nenkqubo yentengiso.
Ukushicilelwa kwekhathalogu yemveliso kuthengiswa kwiindawo ezininzi, umzekelo, uninzi lweendawo zithengiswa kwizixeko ezikhulu, kwaye ngoku uninzi lweendawo ezisemaphandleni ziyathandwa ngokuthe ngcembe, kwaye uninzi lweendawo ezisemaphandleni ziya kuba namandla athile okusetyenziswa.
Ke ngoko, ukushicilelwa kwekhathalogu yemveliso kuyathengiswa kwiindawo ezininzi, kwaye ngokuthe ngcembe yenziwa yaziwe, kwaye inokusetyenziswa kwiindawo ezininzi zelizwe. Ke ngoko, akukho nzima ukufumanisa ukuba intengiso enjalo isenkulu kakhulu, kuba imfuno yentengiso inkulu kakhulu. Kukhulu, ke kwizityalo ezininzi ezinkulu zokuprinta iNanjing, banokuhlangabezana neemfuno ezingaphezulu kwintengiso ukuba bayaqhubeka nokonyusa imveliso yabo.
Ishishini ngalinye linendlela eyahlukileyo yeshishini kunye nefilosofi. Ukuba bafuna ukwenza iimveliso zabo zisebenze ngcono, ewe, baya kukhetha iindlela ezahlukeneyo zokwazisa abantu abaninzi ngobukho babo. Ukuze abantu abaninzi bafumane ukusetyenziswa kakhulu ebomini babo.